शहिद गौतमको दोदा नदीमा अन्त्येष्टि हुँदा देउवा महन्थ ठाकुरसँग सरकारको भीख माग्दै थिए – YesKathmandu.com
शहिद गौतमको दोदा नदीमा अन्त्येष्टि हुँदा देउवा महन्थ ठाकुरसँग सरकारको भीख माग्दै थिए
सोमबार ३०, फागुन २०७३
शहिद गोविन्द गौतमको अन्त्येष्टिमा सरकारका मन्त्री र ठुला दलका नेता पुगेनन्
काठमाडौं । भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसवीद्धारा हत्या गरिएका गोविन्द गौतमको आइतबार राष्टिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरियो । तर अन्त्येष्टिमा सरकारका कुनै पनि मन्त्री उपस्थित भएनन् । सत्ता साझेदार दल र प्रतिपक्ष दलका न त ठुला नेता अन्त्येष्टिमा पुगे, नत सरकारका कुनै मन्त्री नै पुगे ।
सीमाको सुरक्षा गर्न भारतीय पक्षसँग प्रतिवाद गर्दा ज्यान गुमाएका गौतमलाई चौतफी दवावपछि सरकारले शहिद घोषणा गरयो । तर उनको अन्त्येष्टिलाई सरकारले पूर्णतय बहिष्कार नै गरयो । शहिद घोषणा गरेपछि राष्टिय झण्डा ओडाउन भएपनि सरकारका मन्त्री कञ्चनपुर पुग्नु पर्दथ्यो । तरपनि मन्त्रीहरु अन्त्येष्टिमा जाने आँट गरेनन् ।
कञ्चनपु्रको दोदा नदी किनारमा ७२ बर्षीय पिता खेमलाल गौतमले दागबत्ति दिँदा लाखौको संख्यामा उपस्थित भएका नागरिकले भारतबिरोधी नारा लगाइरहेका थिए । अन्त्येष्टिमा भारत विरोधी नारा लाग्ने र त्यसको दोषी सरकारमाथी जाने अनुमान गर्दै सरकारका कुनैपनि मन्त्रीहरु उपस्थित भएनन् । भारत चिडिने आशंकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि अन्त्येष्टिमा नपुगेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
त्यसैगरी ठुला दलका ठुला नेताहरु पनि अन्त्येष्टिमा पुगेनन् । शहिद गौतमको अन्त्येष्टिमा हजारौ नागरिक सहभागि भएका बेला त्यस क्षेत्रका ठुला नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै निवासमा सरकार बचाउने खेलमा जुटेका थिए । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने आग्रह गरिरहेका थिए । उनी प्रचण्ड सरकारको भीख मागिरहेका थिए । त्यसैगरी प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु पनि अन्त्येष्टिमा पुगेनन् । सामान्य बिज्ञप्ती निकालेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पंछिने काम गरेको पुर्नवासका नागरिकले आरोप लगाएका छन् ।
ठुला दलका नेता र सरकारका मन्त्रीहरु अन्त्येष्टिमा नपुगेपछि पुर्नवासका नागरिकहरुले सरकारबिरुद्ध नारावाजी पनि गरेका थिए । उनीहरुले सत्तामा बस्ने पार्टी र तीनका नेताहरुसँग एक एक बदला लिने घोषणा समेत दोहा नदीको किनारमा गरे ।
भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी खोल्छुः डा. लोहनी
आफ्नो माग भन्दा पनि देशको पिडा ठूलो भन्दै डा. केसीले अनसन तोडे
लोकमानलाई कसरी लाग्न सक्छ महाअभियोग ? यस्तो छ कानुनमा
रोल्पामा आत्महत्या गर्ने पुरुष बढी
अघिल्लो दिन उम्मेद्धारी दर्ता भोलीपल्टै मृत
अखिलले महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधीको टुंगो लगायो
कांग्रेसलाई एमाले पछ्याउँदै, कोर मधेसमै राजपालाई झापट (कहाँ कुन पार्टीको अग्रता ?)
मधेशी मोर्चाको बैठक बस्यो, वार्ताअघि दुई सर्त राख्ने तयारी
युवाको काँधमा देशको भविष्य ः नेता पुन
रेनु दाहालको घोषणा – क्रिकेट रंगशाला बनाउन धुर्मसलाई जग्गा दिन्छौं !
भोलीदेखि काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शाकाहारी, ३० देशका ४०० सहभागि
काँग्रेसको समीक्षा बैठक बस्दै नबसी स्थगित
प्रकाशको हत्या भएको प्रचण्डको आशंका,सत्यतथ्य छानविन गर्न तीनै प्रहरी निकायलाई निर्देशन
अर्ली महाधिबेशनका पक्षमा खुले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, खुमबहादुरद्धारा प्रतिवाद
प्रचण्ड सरकारमा त्यस्तो के छ हौ, डा. शेखर ज्यू !
ठूला आयोजना नै बन्द गरेर निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनमा